अपराधमा राजनीति मिसाउँदा समस्या भयो : गृहमन्त्री थापा
चितवन – गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विकास र समृद्धिका निम्ति सुशासन, शान्ति र स्थयीत्व महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनुभएको छ । बुधबार भरतपुरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले सरकार निर्माण भएपछि शान्ति र स्थायीत्वका निम्ति महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भएको बताउनुभयो । निर्मला पन्त प्रकरणमा अनावश्यक राजनीतिकरण भएको बताउँ...
डेलिभरीबिनाको राजनीति अर्थहीन
अहिले राजनीति गर्ने नेतागण सत्ता आरोहण गर्ने यात्राको तँछाडमछाडको प्रतिस्पर्धामा छन् । विशेषगरी कम्युनिस्ट घटकमा निषेधको राजनीति व्याप्त छ । राजनीतिक गफमा जीवन बिताएका अग्रज पुस्ताको कार्यशैली हेर्दा आमजनता वाक्कदिक्क भइसकेको अवस्था छ । विकास, सुशासन र समृद्घ यिनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन अनि कार्यशैलीमा पनि देखिँदैन । जनताको हितमा सरकारी संयन्त्रले काम गर्न नसकेको राष्ट्रिय तथा […] The post डेलिभरीबिनाको राजनीति अर्थहीन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
राजनीति सबै नीतिहरूको राजा हो । त्यसैले राज्य सु-सञ्चालनको नीति समेत राजनीति नै हो । मुलुक चलाउनका लागि सामयिक विधि, प्रविधि, सिप, अध्ययन र कौशल भएका व्यक्तिहरू नै राजनीतिमा आउने हो । नेपालको अवस्था हेर्दा त्यो भएको देखिँदैन । यहीँनेर हाम्रो राजनीति चुकेको हो । ‘नीतिहरूको राजा राजनीति हो’ भनेर हिजो राजनीतिक शास्त्रका विद्यार्थीहरू पढ्थे […]
राजनीति कसका लागि गरिन्छ ? यसको सोझो उत्तर छ–जनताका लागि । तर, नेपालमा अहिले त्यस्तो उत्तर दिइयो भने त्यो पूर्णतः गलत साबित हुने गरेको छ । नेताले त्यस्तो जवाफ दिएमा त्यो कसैले पनि नपत्याउने अवस्था छ । अहिले हाम्रा नेताहरू जनताको नजरमा दिन प्रतिदिन गिर्दै गइरहेका छन् । हिजोका दिनमा बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन […] The post राजनीति कसका लागि ? appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
देश र जनताका लागि राजनीति गरेको हुँ : भीम रावल
डोटी : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावलले आफूले राजनीति देश र जनताको सेवाका लागि गरेको बताएका छन्। गृहजिल्ला अछाम जाने क्रममा बिहीबार यहाँ रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाटका क्रममा उनले आफूले व्यक्तिगत स्वार्थ तथा पदका लागि राजनीति नगरेको बताए।उनले भने, 'म स्वार्थका लागि राजनीति गर्ने व्यक्ति होइन, पार्टी फुट्नु आफैँमा दुःखद भएको तर नेकपा एमालेलाई अझै एकताबद्ध बनाउन १० बुँदे सहमतिको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन पार्टी नेतृत्वसँग लागि
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा.भीमबहादुर रावलले आफूले राजनीति देश र जनताको सेवाका लागि गरेको बताएका छन् । गृह जिल्ला अछाम जाने क्रममा आज यहाँ रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाटका क्रममा उनले आफूले व्यक्तिगत स्वार्थ तथा पदका लागि राजनीति नगरेको बताए ।उनले भने, “म स्वार्थका लागि राजनीति गर्ने व्यक्ति होइन, पार्टी फुट्नु आफैमा दुःखद् भएको तर नेकपा एमालेलाई अझै एकताबद्ध बनाउन दश बुँदे सहमतिको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन पार्टी नेतृत्वसँग लागिपरेको छ
राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धका बारेमा बिभिन्न कोणबाट ब्याख्या बिश्लेषण भएको पाईन्छ । कहींकतै राजनीतिकर्मीहरुले प्रशासनलाई राजनीतिक साध्य पूर्तिको साधन मात्र मानेका छन् भने कसैले राजनीति र प्रशासनलाई दुई पृथक बिषय हुन पनि भनेका छन् । त्यसै गरी कतिपय बिद्वानहरुले राजनीति र प्रशासनलाई एकै सिक्काका दुई पाटाको रुपमा लिएका छन् र उनीहरुले मुलुकको सर्बाङ्गिण बिकासका लागि […]
मेरो सोचको राजनीति
सरकारबाट ३ किलो चामल बाँडिटोपल्ने, काठमाडौंको मेयर जो सामाजिक संस्थाले गरिबलाई खाना बाँड्दा राजधानीको इज्जत जान्छ भन्ने सोच राख्ने, के यो नै हो राजनीति ?
Shilapatra आषाढ २०७८
राजनीति गर्न अरू धेरै एजेन्डा छन्, राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति गर्दैन : मन्त्री पाैडेल
उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७८
अब म पनि राजनीति गर्छु!
सबैले कमाए, सबैले बनाए मेरो पालो आएकै छैन। अब त म पनि राजनीति गर्छु किनभने काठमाडौँमा एउटा घर नभई त, मलाई पनि भएकै छैन।